स्कुटर दुर्घटना हुँदा डेढ घन्टा हरायो हिसिला यमीको स्मरण शक्ति
काठमाडौं । सडक दुर्घटनामा घाइते भएकी समाजवादी पार्टीकी नेतृ हिसिला यमी मंगलबार डिस्चार्ज हुँदैछिन्। आइतबार साँझ मोटरसाइकलले उनी चढेको इ–स्कुटरलाई ललितपुरको बालकुमारीमा ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएकी यमीलाई ग्वार्कोस्थित बिएन्डबी..
काठमाडौं । नुवकोटको विदुर नगरपालिका–५ र बेलकोटगढी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्षले देवीघाटस्थित तादी खोलामा रहेको झोलुङ्गे पुल आफूखुशी बेचेका छन् । विदुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष शिवकुमार चित्रकार र बेलकोटगढी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष..
प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किंदा रविन्द्र मिश्र विमानमै जाममा परेपछि............
काठमाडौं । साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले नेपाल भ्रमण वर्ष शुरू गर्नुअगावै भीभीआईपी उडानका बेला विमानस्थल व्यवस्थापनको तालिम गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किने क्रममा आफ्नो..
काठमाडौं । सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका दुई वडाध्यक्षविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । रकम अपचलन गरेको आरोपमा बाँके प्रहरीले वडा नं १७ का अध्यक्ष अजयकुमार पाठक..
तीन अर्बको चेक र ४ थान पेस्तोल सहित मिटरब्याजी पक्राउ
काठमाडौं । कैलालीमा तीन अर्बको एउटै चेकसहित पक्राउ पर्ने तीनजना मिटरब्याजमा रकम लगाउने र हतियार कारोबारी रहेको खुलेको छ । प्रहरीले बुधबार साँझ कैलालीको चटकपुरबाट चार थान पेस्तोल र सुनसहित..
कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई पनि डेंगी, अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई डेंगीको संक्रमण देखिएको छ। रगत जाँचका क्रममा डेंगीको संक्रमण देखिएपछि बुधबार ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको खनालका प्रेस संयोजक बोमलाल गिरीले जानकारी दिए। गत शुक्रबार हेटौंडाबाट फर्किएलगत्तै..
नेपाललाई स्वीस, बेलायत र नर्वेको ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता
काठमाडौं । यूरोपियन युनियनमा आवद्ध तीनवटा देशले नेपाललाई करीब ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा युरोपियन युनियनमा आवद्ध मुलुक स्विजरल्याण्ड, नर्वे र बेलायतका राजदुतहरुले..
काठमाडौंको लागि उडेको जहाज ३ मिनेटमै इन्जिन बिग्रिएर बन्द भएपछि......
काठमाडौं। बुधबार सीता एयरको ९-एनएजेएच (अल्फा जुनियर होटल) कलसाइन जहाज इन्जिन फेल हुँदा पनि सुरक्षित अवतरण गर्न सफल भएको छ। लुक्लाबाट तीनजना चालकदल सहित आएको जहाज टेकअफ गरिएको तीन मिनेटमा इन्जिनमा..
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले बयानका लागि थप ५८ जना क कस्लाई बोलायो ?
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा थप ५८ जनालाई बयानका लागि बोलाएको छ । जग्गा प्रकरणबारे छानबिन गरिरहेको आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र उपस्थित..
रवि लामिछाने धरौटीको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पुगे
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र युवराज कँडेलले चितवन जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको लागि दुरुत्साहन गरेको..
काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को निर्देशनमा नेपालबाट राजतन्त्र हटाइएको ‘रअ’कै पूर्वअधिकारी अमर भूषणले दाबी गरेका छन्। हालै प्रकाशित पुस्तकमा 'इनसाइड नेपाल' मा रअका पूर्व विशेष निर्देशक भूषणले पहिलो चरणमा..
काठमाडौं । जागिर लगाई दिने भन्दै युवतीहरुलाई यौन शोषण गर्नुको साथै उनीहरुबाट लाखौ रुपैया लुटपाट र ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको छ । सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णा..
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । राष्ट्रपति सी आगामी १५ अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा आउने भएका हुन् । राष्ट्रपति सी त्यसअघि भारतको भ्रमणमा निस्किने र भारत..
काठमाडौं । निर्वाचनका क्रममा जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बढ्दै गएको सेवासुविधाप्रति जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूले बढी सेवासुविधा नलिएको दाबी गरिरहेका छन्..
भारतले आसाममा मात्रै एक लाख नेपाली भाषीलाई भारतीय नागरिकता नदिने
काठमाडौं । भारतीय पूर्वोत्तर राज्य आसामको राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता ९एनआरसी०को अन्तिम सूची प्रकाशित हुँदा एक लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी भारतीयलाई सूचीबाट हटाइएको छ । भारतीय अंग्रेजी अखबार ‘द हिन्दू’ले एक लाखभन्दा..
काठमाडौं । यस वर्षको हरितालिका तीजका अवसरमा भक्तजनहरूको सुरक्षाको लागि पशुपतिमा क्षेत्र परिसरमा महिला प्रहरी खटाउने भएको छ । तीजमा महिला भक्तजनको भीडलाई छिटो पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गराउने उद्देश्यले यस वर्ष..
भारतले सरकारी सूचीबाट १९ लाख नागरिकको नाम हटायो, नेपालीभाषी अनागरिक हुने चिन्ता
एजेन्सी । भारतको आसाम राज्यमा बसोबास गर्ने १९ लाख ६ हजार ६ सय ५७ भारतीयको नाम राष्ट्रिय नागरिकता दर्ताको अन्तिम सूचीबाट हटाइएको छ । आसाममा जम्मा ३ करोड ११ लाख २१..
भीरबाट तीन सय गाई खसाल्ने पाँच ट्रक नियन्त्रणमा
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि १४ किलोमिटर उत्तरमा दैलेख सदरमुकाम जाने सडक उकालो छ। कटकुवा जंगलको सडक छेउमा ठूलै भीर त छैन तर चौपाया भने त्यहाँबाट हिँड्न सक्दैनन्। बिहीबार रातिदेखि त्यही भीरमा..
काठमाडौं । चीनमा यौनदासी बनाउन नेपाली चेलीलाई दुलही बनाउँदै तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोले चीन लैजान लागिएका दुई नेपाली महिला पक्राउ गरेपछि रहस्य बाहिरिएको..
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकले ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७६’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि सांसदहरुले..
वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा भेटे सुनै सुन
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरूले दुईवटा न्युट्रन स्टार ठोकिएको दुई वर्षपछि त्यस प्रक्रियाका कारण थुप्रो सुन र प्ल्याटिनम उत्पन्न भएको बताएका छन् । रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले आफ्नो मासिक बुलेटिनमा एक विश्लेषण प्रकाशित गरेर..
रवि लामिछानेले सरकारलाई सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण बुझाउने
काठमाडौं । शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा अदालतको धरौटीमा छुटेका संचारकर्मी रवि लामिछानेले आफूले सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउने बताएका छन् । प्रहरीले आफुलाई फसाउँने नियतका साथ बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउँन..
आचार्य बालकृष्णलाई कसले खुवायो विष ? दोषीलाई कारबाही हुन्छ: रामदेव
काठमाडौं । गतसाता अचानक अस्वस्थ हुनुभएका भारतस्थित पतञ्जली योगपीठका प्रभावशाली व्यक्ति आचार्य बालकृणलाई कसैले विष खुवाएको खुलासा भएको छ। नेपालको स्याङ्जामा जन्मिएका आचार्य भारतका प्रभावशाली योग गुरु रामदेवका मुख्य सहयोगी थिए।..
यस्तो छ रवि लामिछाने, युवराज र अस्मिताबारे जिल्ला अदालतको आदेशको पुर्णपाठ
काठमाडौं । चितवन जिल्ला अदालतले टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीको विषयमा दिएको आदेश सार्वजनिक गरेको छ। संक्षिप्त आदेश अनुसार लामिछाने पाँच लाख, युवराज तीन लाख..
रवि लामिछाने ५ लाख धरौटीमा रिहा, अस्मितालाई भने साधारण तारेख
काठमाडौँ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि भन्दै पक्राउ परेका टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेलाई पनि ५ लाख..
काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री भट्टराईले यो घोषणा गरेका हुन्..
प्रधानमन्त्री सिंगापुरमा, मन्त्रीहरु सिंहदरबारमा, इतिहासमै पहिलोपटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौ । इतिहासमै आज पहिलोपटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ । आजका लागि दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका..
कर घोषणामा गलत विवरण बुझाए करछलीमा कारबाही हुने
काठमाडौं । स्वयम् कर घोषणाअन्तर्गत व्यक्तिले गलत विवरण बुझाएमा कर छलीसरह नै कारबाही हुने भएको छ। संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, पहिलो संसोधन विधेयक २०७५ मा..
सर्वोच्च अदालतले सोध्यो - जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने कानुन किन बनाएको ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाउने गरी कानुन बनाउनुको कारण सोधेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका अरु प्रदेशसभालाई स्थानीय..
एजेन्सी । भारतीय प्रहरीले कंग्रेस नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री पी चिदम्बरमलाई बुधवार राति घरबाट पक्राउ गरेको छ। भारतका अर्थ मन्त्री र गृह मन्त्री रहिसकेका चितम्बरम कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। उनीमाथि..
Results 1994: You are at page6of 67